တရုတ်ဝက်သားစွပ်ပြုတ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ - Hebei Oceane
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အဆင်သင့်ဝက်သား > စည်သွတ်စွပ်ပြုတ်ဝက်သား > ဝက်သားစွပ်ပြုတ်
စွပ်ပြုတ်ထားသောဝက်သားကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ဝက်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ပြုပြင်ပြီး၊ အလုံပိတ်၊ ပိုးသတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အရသာရှိ၊ စားရအဆင်ပြေ၊ သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူသည်။
စွပ်ပြုတ်ဝက်သား ၏ ရှင်းလင်းချက်
ဝက်သားစွပ်ပြုတ်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မျက်မှောင်ကြုတ်သွားတယ်။ အဆီဝက်သားအဆီသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အပူပေးပြီး နို့ဆီမထည့်ဘဲ "နှင်းပွင့်လေးများ" အလွှာများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ခေါက်ဆွဲတစ်ပန်းကန်လုံး ဗူးသေးသေးတစ်လုံးမှာ အလေးချိန်က အရမ်းကြီးနေသေးတယ်။ အပူပေးပြီးနောက်၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ "နှင်းပွင့်လေးများ" ပြန့်ကျဲသွားပြီး ကျန်သည် အပူပေါက်ကွဲသွားသည့် ဝက်သားကြီးတစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ အဆီတွေ ပိန်တာ သိသာတယ်။ အဆီမစားချင်ဘူးဆိုရင် ပိန်တဲ့အသားကို တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အသားက အရမ်းနူးညံ့ပြီး ပါးစပ်က အရည်ပျော်သွားစေပါတယ်။ ငံပြာရည်ကို ဝက်သားက ကောင်းကောင်းစုပ်ယူထားပြီး ပဲငံပြာရည်အရသာက တရုတ်ဆန်တဲ့ ရှန်ဟိုင်းအရသာနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။
1. ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အာဟာရများ ပိုမိုပါဝင်သည်- လတ်ဆတ်သောကုန်ကြမ်းများ၏ အာဟာရကို သိမ်းဆည်းထားပြီး ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများ မထည့်ဘဲ အအေးခန်းထားရန် မလိုအပ်ဘဲ သိုလှောင်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေသောကြောင့် တပ်မတော်မှ စည်သွပ်ဘူးများသည် ဘေးကင်းခြင်း၊ အာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ .
2. ကောင်းမွန်ပြီး ပျော်ရွှင်မှု- ဗူးခွံကိုဖွင့်ခြင်းသည် အရသာရှိသော ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပြီး မီးဖိုချောင်တွင် အလုပ်များနေမှုများကို သက်သာစေနိုင်သည်။
အစားအစာပြုပြင်ခြင်း၊ စည်သွပ်ဗူး၊ လေဟာနယ်စုပ်ခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ခြင်း၊ စီးပွားဖြစ် ပိုးမွှားကင်းစင်သော အခြေအနေရရှိစေရန်၊ ထို့နောက် သိုလှောင်ရုံတွင် ခုနစ်ရက်ကြာ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဂိုဒေါင်တွင် အပူချိန် ၃၆ စင်တီဂရိတ် (ဤအပူချိန်သည် ဘက်တီးရီးယားများ ကြီးထွားမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်)၊ ကွဲနေသော ဘူးခွံများကို ဖောက်ထုတ်၍ ဈေးကွက်ထဲသို့ မဝင်စေရန်၊
အစိုင်အခဲပါဝင်မှု- â‰¥60%(397g) â‰¥55%(340g၊ 178g)
ပါဝင်ပစ္စည်းများ- ဝက်သား၊ ရေ၊ ပဲငံပြာရည်၊ သကြား၊ ဆား၊ နတ်၊ နံ့သာမျိုး။
Kj နှင့် ကယ်လိုရီစွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း- 1000kJ = 238.9Kcal 397gâ€”1025Kcal /340gâ€”604Kcal/178gâ€”316Kcal
တာရှည်ခံခြင်း- ၃၆ လ (အေးပြီး ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် သိုလှောင်ပါ။)
Hebei Oceane Import And Export Trading Co., LTD. ၆၁ နှစ်ရှိခဲ့ပြီ။ အစကတော့ ကျနော်တို့က စစ်တပ်ပိုင်ဖြစ်ပြီး အခုအချိန်အထိ တပ်မတော်ရဲ့ အရည်အသွေးကို အခိုင်အမာ ရပ်တည်နေဆဲပါ။
ကုမ္ပဏီသည် ပြည်တွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 12 ခု၊ စက်ပစ္စည်းအစုံ 500 ကျော်၊ အဆင့်မြင့်စက်ယန္တရားများနှင့် စက်ကိရိယာများ၊ လက်ရာမြောက်သောနည်းပညာများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် အရသာသေချာစေရန်အတွက် တင်သွင်းပြီး စားသုံးသူများ၏ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းကို ရရှိခဲ့သည်။
နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်
hot Tags:: ဝက်သားစွပ်ပြုတ်၊ တရုတ်၊ လက်ကား၊ ရောင်းချသူများ၊ အသစ်ဆုံး၊ In Stock၊ HACCP